रेप सिन गर्दा धैरै इन्जोय हुन्थ्यो, डाइरेक्टरले कट भनेपछि अनुहार रातो बनाउँथे : राजेन्द्र खड्गी... (भिडियाेसहित) | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
रेप सिन गर्दा धैरै इन्जोय हुन्थ्यो, डाइरेक्टरले कट भनेपछि अनुहार रातो बनाउँथे : राजेन्द्र खड्गी… (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । कुनै समयका चर्चित द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गी यतिबेला नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिबाट हराएजस्तै छन् । करिब ५ सय वटा फिल्ममा द्वन्द्व निर्देशन गरेका खड्गी यतिबेला ‘वल्र्डवाइड डकुमेन्ट्री’ बनाउने काममा व्यस्त छन् । यसका लागि उनलाई १ सय ४० देशमा जानु छ । फिल्म ‘जिन्दगी रक्स’ को असफलता पछि यतिबेला उनी आफ्नै छोरालाई लिएर ‘ज्याक्सलभ’ नाम गरेको फिल्म निर्माणमा व्यस्त छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
हामीले बनाउने फिल्म हेर्ने दर्शक छैनन्
म दर्शकबाट हराएको छैन । यु ट्युबमा सक्रिय नै छु । हामीले बनाएका फिल्म हेर्ने दर्शकहरु सबै खाडी मुलुकमा छन् । गाउँजति सबै सुख्खा भयो । शहरमा हाम्रा दर्शक छैनन् । त्यो जमातलाई पनि टार्गेट गरेर ‘ज्याक्स लभ’ बनाउँदै छु । मेरो ठूलो छोराले यो फिल्म निर्देशन गर्दै छ । मैले ट्रेन गरेका फाइट डाइरेक्टर अहिले चार पुस्तामा छन् । राजेश हमालसँग मिलेर फेरि फिल्म बनाउन मन छ ।
५७ वर्षमा पनि यत्तिको तन्दुरुस्त छु
अहिले म ५७ वर्ष भएँ । शारीरिक रुपमा फिट नै छु । आफूलाई तन्दुरुस्त राख्नका लागि अहिलेसम्म औषधि खाएको र छाला तन्काएको छैन । साधारण नेपालीले जे खान्छन् म पनि त्यही खान्छु ।
भुवन केसीले लगाएको जुत्ता लगाउन लालायित हुन्थेँ
म हेटौंडाको जमिन्दारको छोरा हुँ । फिल्म लाइनमा आउँदा नै एक्सल चढेर हिँड्थे । खान लगाउनमा सौखिन थिएँ । त्यतिबेला भुवन केसीको लगाइ र खवाइबाट निकै प्रेरित भएको थिएँ । म ८ हजार रुपैयाँसम्मको जुत्ता लगाउँथे त्यतिबेला । भुवन दाइलाई देखेर म पनि कुनै दिन त यस्तै जुत्ता लगाउँछु भनेर टार्गेट बनाउँथे । त्यो बेलामा उहाँले ७ हजारको जुत्ता लगाउँदा म ७ सयको डिंगो जुत्ता बनाएर लगाउँथे । एक दिन यो बुढोको भन्दा ठूलो जुत्ता लगाउने सपना थियो । अहिले मेरो घरमा जुत्ता नै १२ लाख रुपैयाँसम्मको छ । एउटै जुत्ता ५०, ६० हजारको छ । जुत्ता र चस्मामा बढी सौख छ ।
पैसा कमाउनेबित्तिकै सुन किनिहाल्थें
अहिले मेरो मात्रै २० तोला जति सुन छ । संघर्षका दिनमा चाँदी लगाउँथे । म रक्सी खाँदै नखाने । पैसा कमाउन थालेपछि सुरुमै सुन किन्थेँ ।७ वर्ष हेटौडा हल्लाएँ
काठमाडौं आउनु पहिला हेटौडा ७ वर्षसम्म हल्लाएर बसेको हुँ । बुबाले धेरै दःुख गरेर कमाउनुभएको सम्पत्ति थियो । आफैँ पनि कमाउँछु भनेर लागि परें । त्यसकारण सबै छोडेर काठमाडौं आएँ । तर, काठमाडौं आएपछि नसोचेको दुःख पाएँ । खान नपाउने स्थितिसमेत आयो । २ वर्षजति म घरज्वाईं बसें । सासु ससुराको उपचार गराएर ऋण पनि तिरें । दादागिरी गरेपनि सहयोग गर्थेँ । जेल पनि गएको छु । हेटौंडामा ज्यानमारा भनेर हतकडी लगाएर बजार पनि घुमाएका छन् मलाई । नागरिक अभिनन्दन पनि पाएको छु । पुलिसको नजरमा मात्र नराम्रो थिएँ । तर, हेटौडाका मान्छे कसैले नराम्रो भनेनन् मलाई ।
पैसा नदिँदा धेरै निर्मातालाई कुटें ।
म ठूलालाई आदर गर्छु, सानालाई माया गर्छु, निहुँ खोज्नेसँग निहुँ नै खोज्छु । धेरै प्रडुसरलाई कुटेको छु । पैसा नदिएपछि माहोल त्यस्तै हुन्थ्यो । भोलि आइजो पर्सि आइजो भनेर टार्ने । त्यसपछि गएर गोदिहाल्थें । बल्ल पैसा दिन्थ्यो । फिल्म लाइनमा पनि म व्यवहारले हैन फाइटले टिक्न सकें । एक समय मलाई फिल्म इन्डस्ट्रिजबाट निकाल्ने नै कुरा भएको थियो । मैले सबैलाई भेटेर आफ्नो काम गर्ने भने । १५, १६ वटा फिल्मबाट फालिदिए । त्यसपछि डटेर काम गर्न थालें । यस्तो पनि समय पनि आयो कि राजेन्द्र खड्गीको फाइट राजेश हमालको टाउको भए फिल्म चल्थ्यो । राजेश र म नै सञ्जय दत्तको फ्यान । त्यहाँदेखि दुवैले कपाल पान थाल्यौं ।
राजेश हमालले राम्रो संस्कार नै पाउन सकेनन्
राजेश हमाललाई बुझ्न नसक्नेले घमण्डी भन्छन् । उनले राम्रो संस्कार नै पाएनन् । बच्चैदेखि होस्टेल बसेर परिवारिक संस्कार नै थाहा पाएनन् । उनी विदेशी स्टाइलका थिए । एकदम इनोसेन्ट थिए । सुटिङ स्थलमा पनि कोहीसँग बोल्दैनथे । चुप लागेर बस्थे । त्यही स्वभाव मन पथ्र्यो ।
राजेशले अरुलाई हानेपछि ‘सरी’ भन्न कहिल्यै जानेनन्
फिल्मको सुटिङको समयमा राजेशजीबाट धेरैजना घाइते हुन्थे । जानी जानी हानेको त होइन तर पनि अरुलाई हानेपछि सरी भनेर कहिल्यै भन्न सिकेनन् । ‘शंकर’ फिल्मको सुटिङमा उनले लौरो हान्दा मेरो हात नै सुन्निएको थियो । मेरी श्रीमती राजेशसँग एकदमै रिसाएकी थिइन् । तीन दिनसम्म पेनकिलर खाएर सुतें । तर, राजेशजीले कहिल्यै सरी पनि भनेनन् । बदला लिन म पनि सक्थें । तर, मैले त्यसो गरिन । तर, पछि पो थाहा भयो की उनको आँखाको दूरीमा समस्या रहेछ । त्यो कुरा पहिल्यै भनिदिएको भए यत्तिका धेरै मान्छे घाइते हुने थिएनन् ।
फिल्मलाइनमा ठिस र सन्की मान्छेहरु आउँछन्
म माया गर्नेलाई टाउकोमा राख्छु, नगर्नेलाई लात्तीले हान्दिन्छु । किनभने मलाई चाप्लुसी गर्न आउँदैन । धेरैले मलाई सन्की भन्छन् । तर, ममात्र होइन यो फिल्म लाइनमा करिश्मा मानन्धर, गौरी मल्ल सबै सन्की छन् । ठिस मान्छेहरु नै फिल्म लाइनमा आउँछन् । करिश्मा जस्तो हिरोइन अरु कोही लाग्दैन । नायकमा भुवन केसी हुन् । ड्रेस अपमा भुवन केसीको फ्यान हुँ ।
हिरो हिरोइन भएपछि जहाँ पायो त्यता जाने होइन
पहिलाका हिरोइनहरु लामो समयसम्म टिक्न सक्थे । अहिले त आएको चार वर्षमा गायब हुन्छन् । किनभने पहिलामा हिरोइनहरु रिजर्भ बस्थे । उनीहरु जता पायो त्यहाँ जाँदैन थिए । जता पायो त्यता जाँदा दर्शक घट्छन् भन्ने बुझेका थिए । त्यसकारण रिजर्भ बस्ने गर्थे ।
फिल्म इन्डस्ट्रिजलाई चौधरी ग्रुपले बिगा-यो
यो फिल्म लाइनलाई चौधरी ग्रुपले राजेश हमाल, निरुता सिंहलाई दैलो दैलोमा चाउचाउ बाँड्न पठाएर बर्बाद बनाएको हो । अझ फिल्म रिलिज हुँदा हल हलमा पुग्छन् कलाकारहरु । कार्यक्रममा जानु भनेको भिन्नै कुरा हो । यो लाइनमा आउनेले व्यक्तिगत जीवनलाई त्यागेर आउनुपर्छ । हिरो हिरोइन भएर हिजोको गायकसँग नाचिरहेका हुन्छन् । स्टारडमलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
अबका पुस्ताका कलाकार १० वर्ष टिकेर देखाऊन् त ?
पहिला निर्देशकले जीवन्त अभिनय खोज्थे । अहिले त्यस्तो छैन । हामीले २० वर्षसम्म राजेश हमाल टिकायौं । अहिलेका पुस्ताले १० वर्ष मात्र पनि टिकाएर हेरुन् न ? हामीले पुष्टि गरिसकेका छौँ । अहिले पनि हामीलाई बाटोमा मान्छेले देख्दा डराउँछन् ।
अहिलेका कलाकारको चुरीफुरी नै धेरै
अहिले फिल्म लाइनमा एक दुई दिनको चुरी फुरी धेरै देखिन्छ । सुरु सुरुमा हायत जाने यता जाने उता जाने हुन्छ । पछि पैसा हुँदैन अनि भट्टीमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ । अब त भट्टीमा हैन सिधै विदेश जान्छन् । पैसा नभएपछि भाँडा माझ्न जानु परिहाल्यो नि । को यहाँ कति टिक्छ भन्ने हो । एउटा लाइनमा बसिराख्नु हुँदैन । अन्य विकल्प पनि खोज्नुपर्छ भन्छु । विकल्प विदेशमा नखोजेर नेपालमा काम गर भन्छु म त ।
फिल्ममा कमाएको पैसालाई राम्ररी जोगाउनु पर्छ
फिल्म लाइनमा कमाएको पैसालाई राम्ररी डिफेन्स गर भन्ने मेरो भनाइ छ । हावामा नउडाउ भन्न खोजेको हो । कमसेकम १० वर्षसम्म टिक्न सक्छु भन्ने दूरदर्शी विचार गर्नुपर्र्छ । आज नाम चलेपछि धरै हा हा हुु हु गर्नु हुन्न । पछि आउने जिन्दगीको लागि पनि सोच्नुपर्छ । फिल्ममा पो लुगा प्रडुसरले लगाइदिन्छ, लाइटिङ हुन्छ । पछि घर फर्किदा त ताल त त्यस्तै हो ।
रेपिस्ट हुन्छु भनेर कहिल्यै सोचेको थिइन
रेप सिन त रियालिस्टिक नै हुन्थ्यो । जे हुन्थ्यो लाइभ नै हुन्थ्यो । हामी बाउन्डरीमा बस्थ्याँै । चलचित्रलाई गरेको भनेर सम्झाइन्थ्यो । रेप गर्न दिनेलाई र गर्नेलाई पनि गाह्रो हो । ‘इन्जोय’ त हुन्थ्यो । तर, हामी आफूलाई कन्ट्रोल गथ्र्यौं । कट भएपछि अनुहार रातो हुन्थ्यो । विपनासँग धेरै पटक रेप सिन थियो । मलाई फिल्ममा लिनुको कारण रेप, गीत नै हुन्थ्यो । अहिले त चुरोट र रक्सी खाने लाइभ दिइन्छ । त्यस्तो लाइभ दिएर हुन्छ ? यस्तो दृश्य दिएपछि घरमा श्रीमतीलाई फकाउन निकै सकस पथ्र्यो । बिपनालाई श्रीमतीलाई फकाउन लगाएँ । बिपनाले श्रीमतीलाई भेट्न थालेपछि बल्ल उनले बुझ्न थालिन् ।
अहिलेको फिल्ममा नयाँपन नै छैन
अहिले फिल्मका प्रोमो हेर्छु । दश वर्षअघि जस्तो एक्सन छोडेको थिएँ त्यस्तै नै छ । पहिला त राजेश हमालले हिर्काउँदा उड्छ की जस्तो हुन्थ्यो । अहिले त एक्सनमा रियालिस्टिक भन्दा पनि फ्यान्टास्टिक बढी भयो । नयाँपन र क्रियटिभिटी खोजिरहेको छु । त्यो भेटेको छैन । नेपाली फिल्ममा फाइटको क्लाइमेक्स लेख्ने मै हुँ ।
अहिलेका हिरोइन वाउ गर्ने लायक छैनन्
अहिले यस्तो ‘वाउ’ गर्ने खालको कोही नायिका देखेको छैन । म्युजिक भिडियोमा धेरै आएर पनि होला । शंकर बीसीसँग नाचेर बस्छन् । मोडलहरु पनि राम्रो हँुदैनन् । नायिकाले आफ्नो आइडिन्टी नै राखेनन् । फिल्म हलमा जाने भनेको केटाहरुले हिरोइन र केटीहरुले हिरो नै हेर्न जाने हो ।
गर्ल फ्रेण्डको हात समातेरै हलमा साढे दुई घण्टा बिताएँ
गर्ल फ्रेण्डको हात समातेर फिल्म सिद्धाएको छु । बाहिर समात्यो भने प्रेमिका डराउँथिन् । हलमा भए अध्ँयारो हुन्थ्यो । कत्ति आनन्द हुन्थ्यो । गर्ल फ्रेण्डको पछ्यौरा समातेर हलमा साढे दुई घण्टा बिताउँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो । गर्ल फ्रेण्ड जति सबै छुटिहाल्यो । हेटौंडामा कति गर्ल फ्रेण्डका नाति भइसके । अहिले बोल्दा पनि किशोर अवस्थामा बोलेकोजस्तो लाग्छ ।